Maxay Sababta ee Dumarka Ugu Oohin Badan Yihiin Raga | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Arimaha Bulshada » Maxay Sababta ee Dumarka Ugu Oohin Badan Yihiin Raga
Maxay Sababta ee Dumarka Ugu Oohin Badan Yihiin Raga
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 24-08-16 10:44 AM Culimada ayaa waxa ee idheheyn : “Hadii aad aragtid adiga oo ooyaya, ha isku celin ilmada, waayo in badan oo kamid ah , muruugada waxa ay soo raacaan ilmada indhahaaga kasoo baxaysa”. Sidoo kale cilmiga ayaa waxa uu sheegaa in ilmada gabadhu ka dheerayso ta ninka. Culimada nafta qaarkood ayaa waxa ay aaminsan yihiin in ilmada dadka waawayni xidhiidh toos ah la leedahay ilmadii caruurnimo..
Waxa ay dadku u ooyaan baahi ay u qabaan in loo naxariisto, iyo in ay iskaga saaraan culayska ka haysta laabta oo aan wax kale ku baxaynin, waxa ay la ooyaan murugo, dhibaato iyo farxad marmarka qaarkood. Oohinta gabadha ayaa waxa loo tiiriyaa laba sababood oo ugu waawayn:
1. Samayska shakhsiyadeed ee dumarka: Waxa dhab ah in dumarku samays ahaan ka awood yar yihiin raga, dhinac nafsi ahaaneed iyo dhinac jir ahaaneedba, Allah SWT ayaana sidaasi ka dhigay, isagaana u sameeyay wax kaste sidii ugu haboonayd.
2. Dheecaanka Prolactin: Dhiicaankan ayaa waxa uu jirku sii daayaa jawaab celin uu u samaynayo marka ay qofka hawl muruugo badani soo food saarto, waana mid dumarka aad ugu badan, markaste oo jirka uu ku batona waxa uu keena ilmo xataa iyadoon wax sidaas u sii wayni jirin.
Hadaba oohintu sideedaba calaamad uma aha taag darro, ha ahaato mid rag ama mid dumarba, mana kala laha waynaan iyo yaraan toona, waa qaab dabiici ah oo uu jirku iskaga saaro waxyaabaha aanuu u baahnayn, waxayna qaboojisa badiyaa xanuunka dhibka qofka haya.